Ungayithumela njani indawo yakho ngeXesha laMqobo ngeTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyithumela njani indawo yakho ngexesha lokwenyani ngeTelegram?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 487
Ukuthumela indawo ngexesha lokwenyani ngesicelo seTelegram ngoku kunokwenzeka. Abasebenzisi beli qonga banokhetho lokwabelana ngendawo abahlala kuyo nakuphi na unxibelelwano abanalo kwisicelo kwaye ukwenza njalo kulula. Apha siza kuchaza inyathelo ngenyathelo ekufuneka ulilandele.
I-Telegram ifake inketho yokwabelana ngendawo yethu ngexesha lokwenyani nalo naluphi na unxibelelwano esilifunayo. Ungathumela indawo okuyo komnye umsebenzisi ukuze loo mntu azi ukuba uphi. Esi sixhobo silungele iimeko apho sifuna ukufikelela kwindawo ekuyiwa kuyo ngokuchaneka ngakumbi.
Ke unokwabelana ngendawo yakho ngexesha lokwenyani kwiTelegram
Itelegram ayisiyiyo kuphela imiyalezo yemiyalezo ekhawulezayo ebandakanya ukhetho lokwabelana ngendawo yethu ngexesha lokwenyaniNangona kunjalo, yenye yezinto ezenza kube lula kubasebenzisi bayo kule nkalo.
Kule sicelo awuyi kuba nenketho yokuthumela indawo kwimephu kodwa kwakhona ungabelana ngendawo yakho ngexesha lokwenyani ngomfowunelwa omkhethayo.
Olu hlobo lwezixhobo inokuba luncedo kubasebenzisi beTelegram, ngakumbi kuloo mizuzu xa uzama ukudibana nomhlobo okanye ilungu losapho.
Amanyathelo okuthumela indawo yakho kumnxeba kwiTelegram
Ngaba ulungelelanisa ukudibana nomhlobo kwaye ufuna ukuba bafike ngokuchanekileyo kwindawo okhoyo? Emva koko iTelegram ikunika isixhobo esingakholelekiyo kwaye kukuthumela indawo okuyo ngexesha elifanelekileyo ngokukhawuleza nangokulula.
Apha sizisa inyathelo ngenyathelo ekufuneka ulilandele ukuze ukwazi ukuthumela indawo ngexesha elililo komnye wabafowunelwa bakho kweli qonga:
Okokuqala kuya kufuneka vula isicelo kwiselula yakho
Khetha umfowunelwa apho ufuna ukuthumela indawo okuyo ngexesha lokwenyani
Yenza cofa iqhosha leqhosha ebonakala emazantsi ekunene kwesikrini.
Ngoku khetha ukhetho "Ubicación":
Kwiskrini uza kubona iindlela ezininzi. Kufuneka ukhethe "Indawo yangempela"
Iwindow entsha iya kuvela kwiscreen apho kuya kufuneka khona khetha ukuba umfowunelwa uza kuyibona nini indawo okuyo ngexesha lokwenyani. Emva koko kufuneka ucofe kwi "share" ukhetho.
Yaziswa xa ukunye
Enye yezinto ezahlukeneyo ezafakwa yiTelegram Ngokubhekisele kwizixhobo zayo zexesha-lokwenyani, ungafumana isaziso xa ukufuphi nomntu owabelana naye ngendawo yakhe.
Ngokulula Kuya kufuneka ucofe umbono wemephu obonakalisiweyo xa omnye wabafowunelwa ekwabelana ngendawo kunye nawe. Emva koko nqakraza kwi-icon yebell kwiradar.
Ngoku kufuneka ukhethe umgama osondeleyo ukusuka kwi-1 yemitha ukuya kwi-10 yeekhilomitha kude. Uya kufumana isaziso xa wena kunye nomnye umntu owabelana naye naye kwindawo ekumgama ongaphantsi komiselweyo.
1 Ke unokwabelana ngendawo yakho ngexesha lokwenyani kwiTelegram
2 Amanyathelo okuthumela indawo yakho kumnxeba kwiTelegram
3 Yaziswa xa ukunye
Uqinisekisa njani iakhawunti ye-twitter?